Fanazavan’ny Pac: tafakatra 18 ireo voarohirohy amin’ny « Raharaha volamena » | NewsMada
Fanazavan’ny Pac: tafakatra 18 ireo voarohirohy amin’ny « Raharaha volamena »
Nivoaka amin’ny fanginany ny eo anivon’ny Tendrom-pitsarana misahana ady amin’ny kolikoly (Pac) manoloana ilay “Raharaha volamena”, sarona tatsy Afrika Atsimo. “Miisa 18 ireo voarohirohy raha valo kosa ireo efa voasambotra. Mety mbola hisy hosamborina koa anefa amin’ity raharaha ity”, hoy izy ireo tetsy 67 ha, omaly. Nanterin’izy ireo tamin’izany fa efa nangataka ny hamerenana an-tanindrazana ireo voasambotra tatsy Afrika Atsimo ny eo anivon’ny Pac. Tahaka izany koa ny hampodiana ilay volamena, amin’ny alalan’ny resaka diplaomatika. “Mitohy ny fanadihadiana sy ny famotorana na efa nisy aza ny nampidirina am-ponja vonjimaika. Aoka isika ho tony fa miasa malalaka izahay. Efa misy hatrany ny fifandraisana eo amin’i Afrika Atsimo sy ny fanjakana, amin’ny alalan’ny Sadc ihany koa », hoy ihany izy ireo. Nanterin’ny eo anivon’ny Pac fa teto ny heloka ary teratany malagasy ireo ka tokony hotsaraina eto koa izany.
Nolavin’i Afrika Atsimo
Na izany aza anefa, voalaza fa nolavin’ny ao Afrika Atsimo ny fangatahan’ny fianjakana hampody ireo teratany malagasy miisa voarohirohy amin’ilay “Raharaha volamena”. Hahemotra ny 1 febroary ho avy izao indray koa ny fitsarana azy ireo any Johannesburg raha tokony ho natao, omaly, izany. Anisan’ny vesatra iampangana sy anenjehana azy ireo ny fanodinkodinam-bola sy ny famotsiam-bola, araka ny lalana ao Afrika Atsimo.
Etsy andaniny, nivory maika koa ny vaomieran’ny harena stratejika eo anivon’ny Antenimierampirenena, omaly, manoloana ity raharaha fanondranana antsokosoko volamena ity.
Efa eny amin’ny fitsarana ny raharaha
Nambaran’ny filohan’ny vaomiera, i Mohamad Ahmad, fa efa eny anivon’ny fitsarana ny famotorana. “Tsy afaka intsony hanangana vaomiera mpanao famotorana ny Antenimierampirenena. Tsy manakana ny hitadiavana ny vaovao marim-pototra anefa izany satria maro ireo mangataka fanazavana sy mitaky ny marina momba izany amin’ny maha solombavambahoaka anay ireo ary amin’ny maha raharaham-pirenena ny zava-mitranga”, hoy ihany izy.